"Ashik Kerib" Umqondo oyinhloko le indaba. Fundisa inganekwane "Ashik Kerib"
Popular inganekwane "Ashik Kerib" Lermontov ayebhalwe ukubhekisela eCaucasus e 1837. Noma yimuphi umfundi kuyoba mnandi kakhulu ukwazi ukuthi umcondvo lobalulekile inganekwane "Ashik Kerib". Phela, emazweni asempumalanga, indaba Ashik Kerib kwakuvamile kakhulu. Imbongi abakhaliphile kakhulu, akakwazanga ukumsiza kodwa banake, ngoba ngaleso sikhathi kakhulu othanda Folk yezinganekwane, izinganekwane kanye izinganekwane. Ngokushesha, uSathane wasungula wakhe ekwelashweni sakhe abantu. Futhi manje, ukuze uqonde kangcono akufundisayo tale "Ashik Kerib" uzoqala nge ezahlukene ngokuphelele.
M. Yu. Lermontov njengoba onesiphiwo elingaphezu kwelivamile etemibhalo ithalente umuntu, njalo ngithanda emasikweni ahlukahlukene kwezilimi namasiko ageleza. Futhi isibonelo "I Demon" inkondlo ukuhlaziywa singabona ukuthi kulotshiwe uhlobo "indaba Eastern", lapho umlingisi esimaphakathi idemoni.
EbuKristwini, idemoni uSathane, uSathane noma ingelosi bawa ngubani kuthatha isikhundla kokuphikiswa ephelele kaNkulunkulu (Allah). Ngakho-ke inkondlo asiqokomisa kulo mbono esikabili zomhlaba, lapho kwabantu kubonakala enkundleni ngoba zivela ngalesikhathi umzabalazo phakathi umphefumulo okuhle nokubi. Humanized isithombe Izikhathi zokubonisana uthando njengendoda isiko imbala idemoni emgqeni yefilosofi zonke sale mpi eyathatha isikhathi ekuqondeni Muslim, okuyinto kuthonywa, ngoba ingxenye yayo, Russian kanye zaseYurophu isiko etemibhalo.
Esikhathini inganekwane "Ashik Kerib" ibonakala omunye ubuso romanticism edabukisayo (umzabalazo emavesini) imbongi. Lermontov, silindele Dostoevsky, benamandla bokungafani phakathi iphupho komuntu ngokujulile injabulo nokungajabuli real zokuphila kwansuku zonke, phakathi ubuhle ekuphileni, uthando sublime nasebunyeni babantu ukubhekana neqiniso lokushonelwa ngesihluku kungamboza ububi ebusweni ezakha kakhulu ezweni lanamuhla.
izisusa Muslim ngemisebenzi Lermontov zingafakwa endaweni eziyinkimbinkimbi zefilosofi ongokomfanekiso, esizibonakalisa kulolu hlangothi, i-generalized umqondo yamaSoviet, isibonelo, ukusekelwa okunjalo imiqondo ngokuthi "East", "incwadi", "isiphetho", "ezidukayo" . Ngakolunye uhlangothi, kungaba waphawula kanye ethize izakhi izinkondlo allegory isici lokusungula Lermontov imbongi. Lena izulu nomhlaba, futhi indlela umdlalo. Izibonelo -. Tale-Turkish M. Yu Lermontova "Ashik Kerib" izinkondlo "angababulali", "Spanish", "yezikhalazo Turk sika", "Impikiswano", "Haji Abrek", "Aul Bastundzhi", "ababili wenceku."
A uhlobo tale "Ashik Kerib"
izingxenye Muslim angabhekwa ngokuningiliziwe lesi sibonelo tale-Turkish. Uyini umcondvo lobalulekile inganekwane "Ashik Kerib"? Iwawo compositional waya lukaKhisimusi eMpumalanga Ephakathi Motifs Asia Ephakathi ezifana izithembiso uthando kwaphakade kanye ukwephulwa ukusebenza kwabo mayelana nesigameko nezimo ezidabukisayo, kanye magic, uhambo, ukushintsha, ukuqashelwa futhi ukubuya.
Futhi ngakho izincwadi Russian yalo msebenzi imisebenzi njengoba omunye wemisebenzi eliqoshiwe ngomqondo ongokomfanekiso, "ngaphansi East" nge isitayela evamile, nemagama ezifana Ana - umama, yeah - Mnumzane, gorursez - ufunde balaika - balalaika, noma isibonelo enjabulo uhlobo "ngo-Sebawoti wa!", njalo njalo. n. kuleli cala, izakhi empumalanga musa yakha isakhiwo uhlelo ezimele, eyenza umuntu angangena isikhala zefilosofi ongokomfanekiso.
I umcondvo lobalulekile inganekwane "Ashik Kerib" - thanda Ashik Kerib futhi Magul-Mageri ukuthi ezibalweni nge ukulandelana lelandzisako, eziyisisekelo esingokwemvelo zezinkondlo zasendulo eMpumalanga. Kuyini ezithakazelisayo, lolu hlobo izikimu compositional ku etemibhalo Western beqonda nje lasekuqaleni. Futhi bonke ngenxa yokuthi akazange aningilize elangazelelwa yokubonisana uthando nokuhlupheka futhi musa ukugxila nasekuqiniseni umcabango bayazi, okuyinto ethatha izithombe akhuthazayo othandekayo. Lo mbono ngokwethembeka lo msebenzi wenza indaba uthando lolumalula khulu.
"Ashik Kerib": umcondvo lobalulekile inganekwane
I protagonist - Ashik Kerib. Engafuni ukuba zincika, lithunyelwa iminyaka eyisikhombisa ziye emazweni akude imali kanye ukuhlela wedding Magul-Mageri - indodakazi womthengisi ocebile Turkish. Ngokushesha wazizwa uthando embhalweni uvezwa njengoMahluleli elinikeziwe, futhi akukho Dynamics ngaphezulu zonke kuze kube sekupheleni.
Eqhubeka indaba, Some, abathandi namaqhawe uyavuma ukuthi uma Ashik Kerib emva kweminyaka eyisikhombisa anibuyelanga ke Magul-Mageri ashade nomunye. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile Ashik abacebile ngokuzumayo akhohlwe sakhe, futhi isikhumbuzi kuphela esitsheni segolide, ethunyelwe umngane wakhe othandekayo umthengisi kwenza isinyathelo endleleni, kodwa isikhathi akuyona. Ngokuyisimangaliso ufika ekhaya baphinde bahlangane othandekayo wakhe ngokumsiza umgibeli angaqondakali ihhashi elimhlophe.
Ezimweni eziningi, izindaba zabantu emhlabeni Muslim, kungakhathaliseki ukuthi usuku kanye nendawo odabuka, ikhodi yabo zefilosofi nezenkolo, okuyinto ovula incazelo efihliwe kombhalo. Umcondvo lomcoka endzabeni inganekwane "Ashik Kerib" hhayi lezo zichaza ukuphila kanye nokuthuthukiswa umugqa uthando, futhi kule nhlangano ezingaqondakali of the hero kanye incazelo eningiliziwe ukubuya kwakhe.
Uma kuhunyushwa umbhalo umkhiqizo kuvela ukuthi umuntu ozalelwe kuleli zwe, khona-ke wayeshaya kanjani endleleni. Ngakho, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba ahlukane nangomphefumulo olulodwa emhlabeni. Umhlaba umuntu kulesi simo kuyindlela ngayo yonke nezinselelo zayo futhi izithiyo.
Futhi lapha isivivinyo ezibaluleke kakhulu futhi kunzima kakhulu, ifundiswa tale "Ashik Kerib" - kanye ukukhumbula mayelana nezwe, yini zonke ngale ndlela saqalwa, futhi ngemva kuphi ukuqala nokuphela.
Futhi-ke, umuntu ngale ndlela akamlahlanga. "UMahluleli Ophakeme" yonke indlela ibeka izibonakaliso zabo, okuzokwenza lula nkumbulo, lena athumele abaprofethi, futhi uqonde ukuthi ahlinzekwa izimbongi futhi abaculi. Khumbula konke emuva umphefumulo, futhi ngaleyo ndlela uthole inselele entsha nezimangaliso entsha in the umklomelo.
Love in indaba iyona esemqoka ukushayela force. Wonke umuntu e-Islam Garip - umfokazi, okuyinto kakhulu inquma ubumsulwa bakhe zokuziphatha kanye nokuhambisana nezimfuneko zenkolo, futhi owagcina "isivumelwano", nokuthi ukubuya kuyoba ngayo yonke idumisa. Ashik Kerib aphuthelwe imithandazo futhi idunyiswe wonke amasiko wakudala Islamic. Siyabonga ebumsulweni nasebunyeni wathola izimangaliso - umhlangano Haderiliyazom (Georgiem Pobedonostsem), ukuphiliswa ubumpumputhe sikanina, okuyinto Kwakushiwo njengoba ubumpumputhe obungokomoya.
ukuhlakanipha ukuze izwe
Kunzima kakhulu ukuthola protagonist Ashik Kerib. Umcondvo lomcoka endzabeni inganekwane ukuthi ngokusebenzisa isithombe lilonke esikweyoku Qur'anic ugcizelela umqondo wokuba double (ocacile ngokuphelele) nokuhlakanipha okujulile emhlabeni jikelele. Yini engase abe okubi esikhathini esithile, umuntu, khona-ke ukushintsha sibe isibusiso esikhulu kuye. Kanye ngendlela okungalindelekile inganekwane ezulazulayo Ashik Kerib esikhohlisayo Kurshud-Beck futhi ubumpumputhe umama kamuva yaphenduka sokunqoba kobulungisa, okuyinto luyasetshenziswa ngokusebenzisa ngengozi ujabule futhi ukubonakala lapho isithunywa ngokuyisimangaliso. amazwi yisakhiwo sodumo babe isitha Kurshud-Beck, bavimba umfowabo, wamshaya yena nge angababulali ukuba abathandekayo Connect. Wathi: "ukuzola ngokushesha futhi azi ukuthi emabunzini umuntu ngesikhathi sokuzalwa vele ukuthi ngeke adlule ..."